5 Siyaabood oo Loo Adkeeyo Habsocodka iyada oo aan wax loo dhimayn hal-abuurka | Martech Zone
Talaado, Febraayo 11, 2020 Isniin, February 10, 2020 Heidi Melin
Suuqleyda iyo hal abuureyaashu waxay heli karaan waxoogaa xirfad ah markii ay ka hadlayaan geedi socodka. Tani waa inaysan layaab ku noqon. Si kastaba ha noqotee, waxaan u kireysanaa awooddooda inay noqdaan kuwo asal ah, male-awaal ah, iyo xitaa aan caadi ahayn. Waxaan dooneynaa inay si xor ah u fekeraan, oo ay naga saaraan waddada la garaacay, oo ay dhisaan nooc cusub oo ka dhex muuqda suuqa dadku ku badan yahay.
Markaa kama noqon karno oo waxaan ka filan karnaa hal-abuurnimadeenna inay noqdaan kuwo si heer sare ah u qaabeysan, raacsan hannaanka u hoggaansan hannaanka aan sugi karin inay falanqeeyaan nuqulka socodka shaqo ee hufan.
Laakiin xitaa kuwa ugu xorta ah ee naga mid ah waa inay qirtaan in marka hawluhu daciif yihiin ama maqan yihiin, fowdo ayaa xukunta, taasina uma fiicna wax soo saar hal abuur leh.
Adduun ay celcelis ahaan shaqaalaha aqoonta wax ku qaataan 57% waqtigooda on wax walba laakiin shaqada loo kiraystay inay qabtaan, ku dhejinta qaab dhismeedka saxda ah ayaa ka muhiimsan sidii hore. Waa sida kaliya ee looga hortagi karo cudurka pandemonium loona oggolaado qof walba inuu qabto shaqadiisa ugu fiican.
Halkan waxaa ah shan dariiqo oo lagu xoojiyo geeddi-socodka si dib loogu soo celiyo waqtiga abaalmarinta, shaqada hal-abuurka ee la jaanqaadaya yoolalka istiraatiijiyadeed ee ugu muhiimsan ee shirkadda.
1. Noqo Mid Qarsoodi Ah
Waxaan si weyn u taageersanahay Kelsey Brogan habka "sneaky process". Anigoo ah agaasimaha maareynta barnaamijka isku dhafan at T-Mobile, Kelsey waxay jeceshahay in dadka loo cadeeyo in qulqulka shaqada ee qaabeysan aysan aheyn in la caburiyo.
Dad badan ma jecla erayga 'geeddi-socod' ama fikradda-sababtoo ah waxay u maleynayaan inuu yahay mid adag. Maahan abuuritaanka xudduudo xaddidan si dadka loogu ilaaliyo waddooyinkooda. Waxay ku saabsan tahay ogaanshaha meesha ay wax ka jiraan, halka ay tahay inay wax noqdaan, halka ay ku habboon yihiin. Waxay ku saabsan tahay bartamaha liistada qof walba oo la dhigo meel uu qof walba heli karo.
Kelsey Brogan, Agaasimaha Maareynta Barnaamijka Isku-dhafan ee T-Mobile
Laakiin iyadu kuma tiirsanaato awooddeeda qancin ama waxay u adeegsaneysaa waajibaadka xagga sare si ay koox koox uga dhex hesho. Taabadalkeed, waxay ka caawisaa hal koox isbeddel markiiba, ka dibna waxay u oggolaaneysaa faa'iidooyinka muuqda ee geeddi-socodka xoogga leh inay hadlaan naftooda. Marka kooxaha u dhow ay arki karaan farqiga u dhexeeya maaraynta shaqada shirkaddu, waxay si dhakhso leh u bilaabaan inay ku qayliyaan inay iyagu qayb ka noqdaan naftooda. Habka Kelsey wuxuu caddeyn u yahay in marka isbeddelka si guul leh loo maareeyo, uu sii ballaadho oo u ballaadho qaab ahaan.
2. Ku dabbaqo Mawduucyada Shaqada lagu celin karo
Noocyada hal-abuurka ahi waxay neceb yihiin soo noqnoqoshada, shaqada bilaa maskaxda ah in ka badan inta badan. Ka xoree qalliinka adoo adeegsanaya tusaalooyin meel kasta oo macno u leh. Adeegso tikniyoolajiyadda maareynta shaqada ee shirkadda si aad u horumariso liisaska hawsha oo dhammaystiran noocyada mashruucyada kala duwan, si toos ah ugu xilsaar doorarka shaqada hawlaha, iyo xitaa qiyaas muddada iyo saacadaha qorshaysan ee subtaak kasta. Tani waxay asal ahaan ka dhigeysaa dhammaan waxyaabaha hawsha xanuunka leh kuwo aan la arki karin abuurayaashaada.
Suuqleyda ayaa geli kara isla markiibana arki kara shaqada shaqsi ahaan loogu xilsaaro. Maamulayaasha hal abuurnimaduna waxay adeegsan karaan aaladaha qorshaynta kheyraadka si ay ula socdaan helitaanka qof walba, halkii ay ka ahayd inay sameeyaan mala awaal aqoon leh ama ay diraan daraasiin emayl si ay u ogaadaan cidda waqtiga u leh waxaas.
3. Macsalaama Qoraalada Dhegdheg
Waxyaabaha sida fudud u fududeynaya hab-maamuuskaaga qaadashada, oo dejinaya marxaladda mashruuca intiisa kale, ayaa wax weyn ka beddeli kara habkaaga hal-abuurka guud ahaan. Ku billow hubinta in codsi kasta oo shaqo loo soo gudbiyo si isku mid ah - oo aan lagu soo dirin emayl, warqad dheg dheg ah, ama fariin deg deg ah. Waad dejin kartaa foomka Google kaas oo si otomaatig ah u buuxiya xaashida dhexe ama, xitaa ka sii wanaagsan, ka faa'iideysashada shaqeynta-codsi shaqeynta meheraddaada maareynta shaqada.
4. Xanuunka ka saar cadeynta
Haddii aad dooratid hal gabal oo keliya oo ka mid ah habka hal-abuurka si aad u xoojiso oo aad u hagaajiso, caddayntu waa ta ugu badan ee lagu guuleysto quluubta iyo maskaxda kooxdaada hal-abuurka ah. Tikniyoolajiyadda caddaynta dhijitaalka ah, waxaad ku baabi'in kartaa silsilado emayl oo aan la aqbali karin, jawaab celin is khilaafsan, iyo jahawareerka nooca ah. Hal abuureyaasha iyo maareeyayaasha taraafikada ayaa si fudud u arki kara cidda ka jawaabtay iyo cidda aan ka jawaabin, taasoo si weyn u yareynaysa baahida loo qabo in la ceyrsado daneeyayaasha ama laga baryo jawaab celin.
Dhibcaha gunnada ah, ku dar maareynta hantida dijitaalka ah (DAM) qeybta qalabkaaga. Dhammaan suuqleyyaashu waxay qadarin doonaan helitaanka deg-degga ah noocyada ugu dambeeyay ee hantida la oggolaaday, oo ay qiyaasi karaan oo ku dhoofin karaan qaababka ay u baahan yihiin, iyaga oo aan marin dariiqa naqshadeeye garaaf ah. Bal ka fikir muuqaalka wejigaaga naqshadeeyayaasha markay maqlaan weligood uma baahna inay qof u soo diraan qof jpg madow iyo caddaan ah astaanta shirkadda mar labaad.
5. Ku martiqaad Qof walba Waxyaabaha
Mar kasta oo aad isbeddel ku sameyneyso geeddi-socodka jira - haddii aad ku dhaqaaqeysid isbeddel dhammaystiran oo dijitaal ah ama aad hirgelinayso cusbooneysiinta habsami-u-socodka shaqada — ku marti-qaado talooyinka kuwa dareemi doona saameynta isbeddelada inta badan. In kasta oo aad u badan tahay inaad haysato maamule nidaam ama khabiir maaraynta mashruuca oo qabanaya hawsha gacanta ee falanqaynta qulqulka shaqada, diiwaangelinta tillaabooyinka, iyo dhisidda qaab-dhismeedka, hubi in hal-abuureyaasha laga filayo inay u hoggaansamaan geeddi-socodka ay ku lug leeyihiin tallaabo kasta. ee jidka.
Sii Fursad Fursad
Waad maqasheen maahmaahdii duugga ahayd ee ahayd in naqshad wanaagsan ay muuqato. Hawlaha shaqadu waa inay u shaqeeyaan si isku mid ah. Markay si fiican u shaqeynayaan, waa inaad si dhib yar u ogaataa iyaga. Ma ahan inay dareemaan carqalad ama mashquulinta ama daal. Waa inay aamusnaan, si aan muuqan u taageeraan shaqada u baahan in la qabto.
Iyo wax qosol badan ayaa dhacaya marka noocyada hal-abuurka ah ay la kulmaan hababka shaqada qaabkan-iska caabbintooda ka hadalka qaabdhismeedka iyo socodka shaqada dhammaantood way baaba'aan. Waxay si dhakhso leh u ogaadaan in hababka dijitaalka ah ee si fiican loo qaabeeyey ay ka badan yihiin iyaga oo ka xoreeya shaqada mashquulka ah iyo hawlaha soo noqnoqda. Waxay sidoo kale ku dhiirrigeliyaan inay si dhakhso leh oo joogto ah u keenaan shaqo tayo sare leh, soo ceshadaan waqtiga hal-abuurnimada iyo hal-abuurnimada, iyo in ka badan maalin kasta ay ku qaataan shaqadii loo kiraystay inay qabtaan.
Tags: habka abuurkaxidheenkaiskaashiga qaabeyntanaqshadaha naqshadeyntacadeynta dhijitaalka ahkelsey broganqoraallo adagt-mobile
Heidi waa Sarkaalka Sarkaalka Suuqgeynta Shaqeynta. Heidi waa tamar sare, natiijooyinka ku wajahan hogaamiyaha sare ee fulinta iyo lataliye leh in kabadan labaatan sano oo khibrad ah soo saarida iyo fulinta istaraatiijiyada suuqa iyo suuq geynta kobcinta.
Sidee Sicir-bararka Suuqa Waqtiga-Sare U Kordhin Kara Waxqabadka Ganacsiga